किन गर्न हुदैन एउटै गोत्रमा (सहगोत्री) विवाह ? यस्तो छ बैज्ञानीक कारणहरु ( भिडियो सहीत ) - Enepalese.com
किन गर्न हुदैन एउटै गोत्रमा (सहगोत्री) विवाह ? यस्तो छ बैज्ञानीक कारणहरु ( भिडियो सहीत )
इनेप्लिज २०७६ वैशाख ३ गते ११:३१ मा प्रकाशित
सगोत्री विवाह वर्जित गरिनुमा अत्यन्त वैज्ञानिक कारण छ । हजारौं वर्ष पहिले ऋषिमुनीहरूले यस कारणलाई सही ढङ्गले बुझेका रहेछन् भन्ने कुरालाई वर्तमानको आधुनिक गर्भ विज्ञानले प्रमाणित गरिदिएको छ । सहगोत्रीसँग विवाह गर्नु नहुने कुरा विज्ञानले पनि मानेको छ । ( भिडियो सहीत )